Adindra: Akara ngosi nke West Africa na-egosi amamihe nke ọdịnala - AFRIKHEPRI
Lelee Creed II (2018)
31 min gụọ
Lọ mara akara Africa nke Egypt nke ọma, mana ugbu a bụ oge ịchọpụta ọtụtụ akara Africa n'Africa karịsịa site na West Africa, akpọrọ Adinkra . Adinkra bụ akara ngosi, nke Ashanti nke Ghana na Gyaman nke Côte d'Ivoire dị na West Africa. Ha na-anọchi anya echiche ma ọ bụ nke yiri ya, ma ejiri ya na akwa, ite, akara na mgbasa ozi. Ihe akara a nwere oru icho mma, ma ha na-egosiputa ihe ndi n’eme ka ozi di nkpuchita nke n'ebufe amamihe, ihe ndi ozo ma obu gburugburu. Nchịkọta dị n'okpuru bụ si Jean MacDonald , a na-ejikwa ya mee ihe na ndị na-ese ihe na ndị na-emepụta ihe n'Africa n'ike mmụọ nsọ, na ebe nrụọrụ weebụ, uwe, ọla na imepụta ejiji, ọ bụghị maka tattoos .
“Laghachi ka i mee ya”
akara ngosipụta dị mkpa nke mmụta site n’oge gara aga
2. Mee NSA NA MU A
“Ọ bụrụ na aka gị dị na efere”
ihe nnọchianya nke gọọmenti ndị na-ekere òkè, ochichi onye kwuo uche na pluralism
Site na ịtụ ụjọ, "Wo NSA da mu un, nnya Wonni wo" - "Ọ bụrụ na aka gị dị larịị, ndị mmadụ anaghị eri ihe niile, ha anaghị ahapụ ihe ọbụla." isi: “Ihe dị ka ihe atụ” site na GF Kojo Arthur
3. SESA na-ehicha
“Gbanwee ma ọ bụ gbanwee agwa gị”
akara nke mgbanwe nke ndụ
Ihe ngosi a na - ejikọta akara adinkra abụọ dị iche iche, “Star Morning” nke nwere ike igosipụta mmalite ọhụrụ maka ụbọchị, etinyere ya na wiil, na-anọchite anya ntụgharị ma ọ bụ mmegharị onwe.
“Mkpụrụ osisi wawa”
ihe nnọchiteanya nke iguzogide, ike na nnọgidesi ike
Mkpụrụ nke wawa dị ukwuu
ike. Na omenaala Akan, ọ bụ akara nke onye siri ike ma sie ike. Ọ na-akpali onye ahụ ịtachi obi na ihe isi ike.
“Onye iro na-a juiceụ mmiri nke ya”
akara nke ekworo na ekworo
'Mgbe ị rịgooro ezigbo osisi'
akara nke nkwado, nkwado na agbamume
Site n'okwu ahụ "Woforo dua un pa, na yepia wo" pụtara "Mgbe ị rịrị ezigbo osisi, a ga-enyere gị aka".
N’ime usoro ntaneti, ọ pụtara na mgbe ị na-arụ ọrụ maka ezi ihe, ị ga-enweta nkwado.
Isi Iyi: Ngwa nke na-ekwu site n'aka GF Kojo Arthur
akara nke uche, ike, hardiness
Dị ka Akwụkwọ Adinkra , ihe a nke akara a dị ka njikọ nke agbụ, ma gosipụta ike, yana mkpa ọ dị ịkwadebe nke ọma.
ihe nnọchianya nke ọnwụ na-echetara nke ephemeral odidi ndu n’ime uwa nka na odi nkpa iji bie ezi ndu na ibu onye nkpuru obi kwesiri ekwesi
"Ọkụ na-arịgoo raffia osisi '
ihe nnoo nke ike, amamihe na
nke ịdị uchu
N'ihi ogwu ya, Osisi raffia bụ ihe egwu dị oke egwu nye agwọ ahụ. Ike ya ịrịgo, o bu ihe nlere-anya nke inagide ma nwe uche.
“Ọnwa na Kpakpando”
akara nke ima, iguzosi ike n'ihe, nkwekorita
Ihe ngosi a na egosiputa nkwekorita di na nkwekorita nke nwoke na nwanyi.Proverb: “. Kyekye pe na-agba ”(North Star nwere ịhụnanya miri emi maka alụm. Ọ ka nọ na mbara igwe na-eche nlọghachi ọnwa, di ya ..) -From Akwụkwọ Adinkra )
11. ONYANKOPON ADOM NTI BIRIBIARA DỊ N'ỤLỌ NCHE
“Site na amara nke Chineke, ihe nile ga-adị nma”
akara nke olile anya, inye ihe, okwukwe
12. OKWU NDỊ MMADỤ
“Akụ azụ nke ugo”
akara nke ike, obi ike, ike
Ugo bụ nnụnụ kachasị ike na mbara igwe, a na-etinye ike ya na ọdụ ya. Agbụrụ Oyoko, otu n'ime ebo itoolu nke Akan, na-eji akara a dị ka ihe nnọchianya ezinụlọ.
"Neverhụnanya adịghị ada n'ụlọ ”
akara nke ike nke ihunanya
“Amaghị nke amamihe”
akara nke amamihe, nka, ọgụgụ isi na ndidi
Ihe nnọchianya a na-akwanyere ùgwù nke Akan, akara a na-ebugharị echiche ahụ bụ na “onye maara ihe nwere ikike ịhọrọ ụzọ kachasị mma iji ruo ebumnuche. Wisebụ onye maara ihe gụnyere oke ihe ọmụma, mmụta na ahụmịhe na ikike itinye ikike ndị a maka ebumnuche bara uru. "(Willis" Akwụkwọ Adinkra ")
15. BỤTA IHE ANYỊ
“Chineke bụ eze”
akara nke ebube na nke kachasị elu nke Chineke
Isi Iyi: Ngwa nke na-ekwu site GF
'Site n'amara nke Chineke'
akara nke okwukwe na ntụkwasị obi na Chineke
Dabere na Adinkra Dictionary nke W. Bruce Willis si kwuo: “E gosipụtara mkpanaka a dị ka ndị ọrụ nke ndụ n'ọtụtụ ọdịbendị. O gosiputara Akan na nri bu ihe ndu, ya buru na ha agagh adi ndu ma obughi nri nri Chineke nyere. "
17. NKWUKWỤKWỌ NDỊ NA-EZI NA MAWU
“Chineke anaghị anwụ anwụ, ya mere enweghị m ike ịnwụ”
akara nke omni nile nke Chineke na ebighebi nke mo nke madu
Nka negosi anwu anwu nkpuru obi nke madu, nke ekwere na obu ihe nke Chineke, nihi na nkpuru obi nonyere Chineke ma onwua, onwu anwu.
18. NYAME dị ka WO SORO
“Chineke nọ n'eluigwe”
akara nke ncheta Ihe ncheta na ebe obibi nke Chineke
ebe dị n'eluigwe, ebe ọ ga-anụ ekpere niile.
“Nwa nke kpakpando”
akara nke onye nlekọta Ihe ncheta na
Chineke bụ nna ma na-elekọta mmadụ niile.
Fabricdị akwa ejiri aka rụọ
akara nke ezigbo, ezigbo,
Eziokwu Dabere na "The Adinkra Dictionary" nke W. Bruce Willis dere, NSAA
akara egosiputa otu okwu: “nea onnim NSAA oto n'ago”, nke o sụgharịrị dị ka Onye obula amaghi Nsaa zuru ma o gha azu azuru a. “Nsaa mma abiala ka ochite anya oru oru n'ozuzu.
akara nke mbido, ike ya na nnabata ya
Nkewa di iche iche emere na adinkra akwa tupu stam
akara nke nka, nkenke tupu ejiri akara ejiri adinkra kpuchie ya, Ndị omenkà na-egbochiri kwaaji ahịrị na eriri n’igbe akụkụ anọ na-eji a gbanye akwa ezé. Nkwadebe a bụ ihe atụ nke usoro siri ike nke emepụta ngwaahịa nke kachasi elu.
“Osisi nke Chukwu” - ebe ịchụ-aja
akara nke ọnụnọ na nchebe nke Chineke. na Nyame Dua bụ ebe dị nsọ ebe ememe okpukpe. Ebube n'ihu nke
ụlọ ma ọ bụ ogige ọ mere site na osisi egbueworo, ebe atọ ma ọ bụ ọtụtụ alaka na-ezukọ. Ihe ntinye a jigide bladdell zuru ezu ya na mmiri na ogwu ma obu ihe omuma ndi ozo maka idi ocha na ngozi
akara nke ịdị n’otu na mmekọrịta mmadụ na ibe. Ihe ncheta nye
tinye aka na obodo, na na ịdị n'otu bụ ike
25. NEO OPE BỤ OKWU NKE
“Onye ọ bụla nke chọrọ ịbụ eze”
akara nke ọrụ na onye nduOkwu "Nea ope soi Obedi hene daakye pas, firi ase sue som ansa" pụtara "ọ onye choro ibu eze n’ọdi aghaghi ibu uzo muta ije ozi. "
Isi Iyi: Ngwa nke na-ekwu site
26. NEA ONNIM NO NKE A, OHU
“Onye na-amaghị amaghị amụ site na ịmụ”
akara nke ihe omuma, ndu akwukwo na ndu n’iru n’iru ihe omuma
Isi Iyi: Ụdị Dị
atụ site n'aka GF Kojo Arthur
“Agwọ ise” (nke ntutu)
akara nke ọrụ ndị nchụàjà, iguzosi ike n'ihe na Mkpịsị aka “A sịrị na akara a bụ ntutu isi nke ọ joyụ. Nke a bụ
ndi odo ntutu isi. Ihe ngosi adinkra
mpuannum dị ka ụzọ e si kee ntutu isi ndị nwanyị. Ya onwe ya kwa na-anọchite anya ntinye ofufe na ikwesị ntụkwasị obi a na-ebipụta mgbe ị na-arụ ọrụ mkpa. Na mgbakwunye, mpuannum pụtara iguzosi ike n'ihe ma ọ bụ ihe dị elu
ọrụ nke ihe mgbaru ọsọ a chọrọ. "
W. Bruce Willis, Adinkra Dictionary
“Ntuli aka / imezi ihe”
akara nke imekorita,
udo na mgbochi Mpatapo na-anọchite anya njikọ ma ọ bụ eriri nke ejikọtara
ndị ọzọ na-ese okwu maka esemokwu udo. Ọ bụ ihe nnọchianya
nke udo mgbe esemokwu.
“Nke na-ewepụ chi ọjọọ”
akara nke ịdị mma na ịdị nsọ
akara nke mgbanwe, ike
Isi mmalite nke ndụ:ákwà yiri atụ site n'aka GF Kojo Arthur
“Resistantlọ na-eguzogide ikuku”
akara nke obi ike na ọchịchọ iji nagide ndụ
Ihe omuma a na-egosi ulo oru ma ọ bụ nke wuru - nke e wuru
iguzogide ọnọdụ ikuku na nke aghụghọ. Ọ na-egosipụta na akụkọ akụkọ Asante a ahịrịokwu na nchịkọta edeghị nke Golden Stool. Ihe ndekọ metụtara ya kwuru na dịka amaokwu a, a ghaghị iwusi ụlọ mud na Kumasi ahịhịa. Nkwado a nwere ike ime ka ụlọ ahụ sie ike onodu ojoo. "
De Akwụkwọ Adinkra site na W.
32. M GA-EME
“M ga-alụ gị”
akara nke ntinye, nnọgidesi ike okwu ahụ "Ọ dịghị onye na-abanye n'ọrụ nke ịgwakọta ihe maka owuwu nke ụlọ agbamakwụkwọ ahụ ”.
Lee Ụdị Dị
atụ site na GF Kojo Arthur, p. 89, 163.
“Ihe m nụrụ, m na-edebe”
akara nke amamihe, ihe omuma na amamihe nke pụtara “Masie mate” bụ “Aghọtara m”. ịghọta
pụtara amamihe na ihe ọmụma, ma ọ na-egosipụtakwa ịdọ aka ná ntị ịbanye Chee echiche ihe onye nke ozo kwuru.
“Uwe ntutu nke onye isi agha Asante”
ihe ngosi nke obi ike na ume “Nke a
A na-ekwu na ihe nnọchianya bụ otu ụdị nke ntutu Kwatakye, onye agha nke agha ochie Asante. Ihe ngosi a putara ihe n’inwe obi ike na itu egwu. Ọ bụkwa nyere ya ezigbo nwa ọ bụla nke obodo Akan.
“Vvụbiga mmanya ókè”
akara nke mpako
Symbol 'ezigbo bed' nke ezigbo alụmdi na nwunye nke ngosipụta nke a na-ekwu na nwanyị lụrụ ezigbo di ma ọ bụ nwunye dinara n’elu ezigbo àkwà.
atụ site na GF Kojo Arthur, p. 87-89
37. HYE YA HYE
“Ihe na-adịghị ere ọkụ”
akara nke enweghị ike na ntachi obi
Ihe oyiyi a na-enweta ihe ọ pụtara site n'aka ndị ụkọchukwu omenala bụ ndị nwere ike ịga ije ọkụ na - enweghị ọkụ n'ụkwụ gị, na - akpali ndị ọzọ ịtachi obi na merie nsogbu.
“Ihe eji atụ ihe”
akara ngosi maka nyocha na njikwa ogo Akara a na-emesi mkpa ọ dị ịlụ ọgụ maka àgwà kachasị mma, ọ bụ na mmepụta nke ngwaahịa ma ọ bụ ụlọ ọrụ mmadụ.
akara nke elu nke Chineke Nke puru iche ma Ihe ngosi mara mma bu uzo di na Ghana. Nke a bụ nnọọ ihe kachasị ewu ewu, maka iji
na ochicho mma, ihe ngosi nke ndi mmadu Ghana ndị mmadụ
Agụ iyi Siamese ”
akara nke ochichi onye kwuo uche ya na idi n'otu Siamese agụ iyi na-ahapụ afọ, ma ha na-alụ ọgụ maka nri. Ihe ngosi a di nma
ihe ncheta na esemokwu ime obodo na agbụrụ bụ ihe ọjọọ nye ndị niile sonyere na ya.
“Jiri okooko osisi na-acha odo odo mee”
akara nke ekworo na anyaụfụ “Mgbe fofo akuku na-ada, ha na-adi ka ndi oji. Akan na-ekpuchi ọdịdị site na nke a osisi na onye ekworo "
Nkọwa Adinkra nke W. Bruce Willis dere.
E nwere ilu Akan metụtara akara a: “Gịnị bụ mkpụrụ fofo
nsi nkpuru nke gyinantwi ojii. ”
“/Lọ / onyinye”
akara nke nchedo na nchekwa nke Akan (Asante) ije, jikọtara ụlọ obibi niile nwere naanị otu ntinye na ụzọ ọpụpụ.
Symbol 'nnwere onwe' nke nnwere onwe, nnwere onwe, inwereonwe
Site n'okwu a: Fawodhodie en obre na enam. Nsụgharị ederede:
"Nnwere onwe na-arụ ọrụ ya."
De ákwà dị ka ihe atụ site
“Ezé na ire”
akara nke enyi na nnabata
ezé na-arụkọ ọrụ ọnụ na-adabere na ọnụ. Ha nwere ike ịbanye
agha, ma ha kwesịrị ịrụ ọrụ ọnụ.
akara nke iwu na ikpe ziri ezi, ịgba ohu na ndọta Adolph
Agbo, “Ihe ngosi Adinkra Symbols” kwuru na ewebata ihe aka
Afrika n'ihi ahia ohu, ma emesia buru ndi amara n'etiti ndi ndu nke
na-emechi iwu na-emebi iwu. “Ihe nnọchianya a na-echetara ndị mejọrọ ihe
enweghị mmebi nke iwu. Ma, ọ na-akasi ụdị ịgba ohu niile ọsọ. ”
akara nke ịhụnanya, nchekwa na nchekwa ụlọ maka Akan bụ nke a pụrụ iche. A na-ahụ ụlọ nwere ihe mgbochi gburugburu dị mma obibi. Nsuba n’egochiri ekewa ma na echekwa ezin’ulo site na n'èzí. N'ihi nchekwa na nchebe nke ngere, nke ejikọtara akara na nchekwa na nchekwa nke mmadụ hụrụ n'ịhụnanya.
Site na Adinkra
Ihe eji ama ya dika ume ya nwere ebulu ahu guzo were ọgụ megide onye mmegide, ma jiri nwayọ gbagha ọgụ
na-ekwusi ike na ọ bụrụgodị mkpa siri ike ịdị umeala n'obi.
akara nke mara mma na ịdị ọcha; ihe nnọchianya nke ihe a na-achọsi ike àgwà nke nwanyi A na-eji ihe akara a pụtara ntakịrị
iche na “The Adinkra Dictionary” na “ụkpụrụ nke Adinkra Symbols”; Nke gara aga na-ekwusi ike na njiri mara ụdị nwanyị nke obiọma nwanyị, ịhụnanya na na-elekọta, ebe nke abụọ nwere nkọwa nkịtị karịa, na-achọ nke ka mma na ezigbo ịdị ọcha. N'ọnọdụ ọ bụla, inyefe bụ ihe dị oké ọnụ ahịa nke ndị Akan nwanyị, na-eji ejiji ma maa ntutu isi ya.
Ahịrị dabara na agụ iyi
ka na-eku ume ikuku, nke na-egosi PDTPE
“NM si na bọọdụ bọọlụ ”
akara nke ọgụgụ isi na ọgụgụ isi
"Nyere m aka ka m nyere gị aka ”
akara nke imekọrita na mmekọrịta
Isi Iyi: “Ihe dị ka ihe atụ” site
52. BI NKA
“Ọ dịghị onye kwesịrị ịkọ ibe ya”
akara nke udo na nkwekorita Nke a dọrọ aka ná ntị megide mkpasu iwe na esemokwu. Ihe onyonyo a dabere na ita ita azu
nke ọ bụla ọzọ.
“Akpa nke akụ”
akara nke akụnụba, ike, ụba, ụba, Ọbụbụbụbụbụbụbụbụbụbụbụbụbụbụbụebi nke Koola rụrụ ọrụ dị mkpa na mmepe akụ na ụba site na Ghana. A na-eji ego eme ihe n'ọtụtụ ebe, ya na akụ na ụba
na ụba. Ihe ngosi a na - egosiputa oru aka oru ubi na ahia mmechi nke ndị mmadụ.
akara nke ntachi obi na ịba uru. The fern bụ osisi siri ike ihe ọkụkụ nke nwere ike itolite n’ebe siri ike. “Owo emi ada idiọn̄ọ emi na-egosi na ọ diri ọtụtụ ahụhụ ma lanahụ ọtụtụ nsogbu. "
(Willis, Akwụkwọ Adinkra )
55. AKWỤKWỌ NDỊ DỊ N'ỤLỌ NCHE
“Ala nwere ibu”
akara nke inye na Chi nke nneEarth. Ihe nnọchianya a na-anọchi anya ịdị mkpa nke ụwa na njikwa ndụ.
“Isi nke akara adinkra”
akara nke ịdị ukwuu,
A na - ekwu na njiri mara na idu ndú A na - ekwupụta akara a nyere aka na
njirimara akara ndi ozo. ọ pụtara mkpa ọ dị igwu egwu a
akara nke ịnọ na nche na ntụkwasị obi Akoben bụ mpi na-eti mkpu agha.
akara nke obi ike, obi ike, dike na mma agha agha bụ ihe a ma ama na uwe nke ọtụtụ Akan oge ochie States. Tụkwasị n'ịghọta obi ike na obi ike, mma agha nwere ike ịnọchite anya ya ikike ziri ezi nke steeti.
59. Oge NAN
“Ofkwụ nne okuko”
akara nke nurturing na discipline The full name of ihe omuma a na-aputa "Nkpukpo umu anu ulo ya, ma o dighi egbu
ha. “Ọ na-anọchi anya ọdịdị dị mma nke ndị nne na nna, ịbụ ma ihe nchebe na ndozi. Otu agbamume iji zụọ ụmụaka, ma ịdọ aka ná ntị ka ha ghara imeri
"ihe jikọrọ obi ”
akara nke nghọta na nghọta
akara nke amamihe, okike na mgbagwoju anya nke ndụ Anansi, ududo, bụ agwa a ma ama na Afrịka ifo.
akara nke ndidi na ndidi Dị ka Agbo si kwuo, mgbe a
E kwuru na mmadụ ‘nwere obi n’afọ ha,’ onye ahụ na-anabata ihe niile.
Sapientogram ma ọ bụ ihe odide echiche ADINKRA nke ndị Akan. Olu 1
4,37€ dị na ngwaahịa
Ejiri 1 € 4,37 mee ihe
Zụta € 4,37
ka nke ọnwa Julaị 4, 2020 5:52
Publication Ụbọchị 2017-01-01T00:00:00.000Z
Ihe omumu ihe omumu nke negosi na ndi oji bu ndi oji
Kraịst dị ebube nke Kraịst ọhụụ?
Nyansapo Fest VS Hidalgo - The Light
Site na ntutu isi kwụ ọtọ na ezigbo ntutu. Ihe omume ahụ dịgidere n'udo (ya mere aha Nyansapo, ihe nnọchianya West Africa na-achụ amamihe) na-ekwu na mmụọ otu ebe […]